Medical Writings: Infection (အင်ဖက်ရှင်) ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း၊
သေးငယ်သော ရောဂါပိုးမွှားလေးများက လူ့ကိုယ်ထဲဝင်၍ လူခန္ဓာကိုယ်အား အသုံးပြုလျက် မျိုးပွားကြပြီး၊ အုံကျင်းဖွဲ့ကာ နေထိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကြောင့်ရသောရောဂါများကို infectious diseases ကူးစက်ရောဂါများဟု ခေါ်သည်။ ရောဂါ တမျိုးရှိနေစဉ် ထပ်မံ ရလာသည့် ရောဂါပိုးသစ်ဝင်ခြင်းကို Secondary infection ဒုတိယပိုးဝင်ခြင်းဟု ခေါ်သည်။
သေးငယ်သော ရောဂါပိုးမွှားလေးများက လူ့ကိုယ်ထဲဝင်၍ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အား အသုံးပြုလျက် မျိုးပွားကြပြီး၊ အုံကျင်းဖွဲ့ကာ နေထိုင်လျက် လူကိုရောဂါရစေခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့ကြောင့်ရသောရောဂါများကို Infectious diseases ကူးစက်ရောဂါ များဟု ခေါ်သည်။ ရောဂါတမျိုးရှိနေစဉ် ထပ်မံရလာသည့် ရောဂါသစ်ဝင်ခြင်းကို Secondary infection ဒုတိယပိုးဝင်ခြင်း ဟုခေါ်သည်။ ထိုသို့ဖြစ်သောအခါ လူ၏တုံ့ပြန်မှုကို Inflammation (အင်ဖလမေးရှင်း) ရောင်ခြင်းဟုခေါ်သည်။ ရောင်ခြင်း ဖြစ်လျှင် အောက်ပါ လက္ခဏာကြီး ၅ မျိုးဖြစ်လာသည်။
၅) လုပ်ရမည့် အလုပ်ပျက်ခြင်း၊ Loss of function = Functio laesa
Acute infection ရက်တို (ရုတ်တရက်) ဖြစ်သော (အင်ဖက်ရှင်) နှင့် Chronic infection ရက်ရှည် (အင်ဖက်ရှင်) ဟူ၍ နှစ်မျိုးရှိသည်။ (အင်ဖက်ရှင်) ရသည့် ရောဂါများအမည် အဆုံးတိုင်း၌ –itis နှင့် ဆုံးသည်။ ဥပမာ Dermatitis အရေပြား ရောင်ခြင်း၊ Appendicitis အူအတက်ရောင်ခြင်း၊ Meningitis ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ Tonsillitis အာသီးရောင်ခြင်း၊
Infection (အင်ဖက်ရှင်) ရစေသော ပိုးများ
1. Bacteria ဗက်တီးရီးယား၊
2. Virus ဗိုင်းရပ်၊
3. Parasite ပါရာဆိုက်၊ နှင့်
4. Fungus ဖန်းဂတ်စ်၊
(1) Bacterial infectious diseases ဗက်တီးရီးယားကြောင့် ဖြစ်သော ရောဂါများ
Anthrax = နွားမှတဆင့် ကူးစက်သော ဒေါင့်သန်းရောဂါ၊ Antibiotic Diarrhea = ပဋိဇီဝဆေးကြောင့် ဝမ်းပျက်ခြင်း၊ Bacterial Meningitis = ဦးနှောက် အမြှေးရောင်၊ Bacterial Vaginosis = မွေးလမ်းရောင်ခြင်း၊ Brucellosis = တိရိစ္ဆာန် မှတဆင့် ကူးသည့်ရောဂါ၊ Chancroid = ရှန်ကာ၊ Chlamydia = မွေးလမ်းရောင်ခြင်း၊ Cholera = ကာလဝမ်းရောဂါ၊ Clostridium botulinum = အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ Conjunctivitis = မျက်စိနာခြင်း၊ Diphtheria= ဆုံဆို့နာ၊ Epididymitis = ကျားအစိ ရောင်ခြင်း၊ Food Poisoning = အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ Gardnerella = မွေးလမ်းပိုးဝင်ခြင်း၊ Gas Gangrene = အနာပုတ်ခြင်း၊ Gonorrhea = ဂနိုရီးယား၊ H. Pylori = အစာအိမ်နာ၊ Impetigo = အရေပြား အနာရင်းခြင်း၊ Leprosy (Hansen's Disease) = အနာကြီးရောဂါ၊ Lyme Disease = လိုင်းမ်ရောဂါ၊ Orchitis = ကျား အကြောရောင်ခြင်း၊ Osteomyelitis = အရိုးတွင်းရောင်ခြင်း၊ Otitis Media = နားပြည်ယိုခြင်း၊ Pertussis (Whooping Cough) = ကြက်ညှာ ချောင်းဆိုး၊ Plague = ပလိပ်၊ Pneumonia = နူမိုးနီးယား၊ Prostatitis = ကျားဆီးကြိတ် ရောင်ခြင်း၊ Pyelonephritis = ကျောက်ကပ်ပြွန် ရောင်ခြင်း၊ Rheumatic Fever = ရူမက်တစ်အဖျား၊ Salmonellosis = ဆာလ်မိုနယ် လိုးဆစ်၊ Shigellosis = ရှီဂယ်လိုးဆစ်၊ Syphilis = ဆစ်ဖလစ်၊ Tetanus = မေးခိုင်၊ Trachoma= မျက်ခမ်းစပ်၊ Traveller's Diarrhea = ခရီးသွားဝမ်းပျက်၊ Tuberculosis (TB = Koch’s) = တီဘီ၊ Typhoid = တိုက်ဖွိုက်၊ Typhus Fever = တိုက်ဖတ်စ် ရောဂါ၊ Urinary Tract Infections = ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊
(2) Viral infectious diseases ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဖြစ်သောရောဂါများ
AIDS = အေအိုင်ဒီအက်စ်၊ Bronchiolitis = လေပြွန်ငယ်များရောင်ခြင်း၊ Chickenpox (Varicella) = ရေကျောက်၊ Common cold = အအေးမိ၊ Conjunctivitis = မျက်စိနာ၊ DHF = သွေးလွန်တုပ်ကွေး၊ Encephalitis = ဦးနှောက်ရောင်၊ Hepatitis = အသဲရောင်၊ Herpes = ရေယုံ၊ Herpes Zoster = ရေယုံ၊ Human Papilloma virus = ကြွက်နို့၊ Influenza (Flu) = တုပ်ကွေး၊ Measles (Rubeola) = ဝက်သက်၊ Measles = ဝက်သက်၊ Meningitis = ဦးနှောက်မြှေး ရောင်၊ Mumps = ပသိရောင်၊ Orchitis = ကျားအစိရောင်၊ Poliomyelitis = ပိုလီယို၊ Rabies = ခွေးရူး၊ Rubella (German Measles) = ဂျာမန် ဝက်သက်၊ Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) = ဆားစ်၊ Smallpox = ကျောက်ကြီး၊ Viral encephalitis = ဗိုင်းရပ်စ် ဦးနှောက်ရောင်၊ Viral gastroenteritis = ဗိုင်းရပ်စ် အစာလမ်းရောင်ခြင်း၊ Viral Pneumonia = ဗိုင်းရပ်စ် နူမိုးနီးယား၊ Viral pneumonia = ဗိုင်းရပ်စ် နူမိုးနီးယား၊
(3) Parasitic infectious diseases ပါရာဆိုက်ကြောင့်ဖြစ်သော ရောဂါများ
African Sleeping Sickness = အာဖရိကအိပ်ချင်ရောဂါ၊ Amebiasis = အမီးဘား ဝမ်းကိုက်၊ Ascariasis = သန်ကောင်၊ Bed Bugs = ကြမ်းပိုး၊ Enterobiasis (Pinworm) = စအိုယားစေသည့် သန်ကောင်၊ Filariasis = ဆင်ခြေထောက်၊ Giardiasis = ဂိုင်ယားဒီးရေးဆစ်၊ Hookworm = ချိတ်သန်ကောင်၊ Lice = သန်း၊ Malaria = ငှက်ဖျား၊ Pinworms = အပ်ပုံသန်ကောင်၊ Scabies = ဝဲ၊ Tapeworm = တိပ်ပြားပုံ သန်ကောင်၊ Trichinosis = ဝက်မှကူးသည့် သန်ကောင်၊ Trichomoniasis = (ထွိုင်ကိုမိုးနပ်စ်) = လိင်မှတဆင့် ကူးစက်သော မွေးလမ်း-ဆီးပြွန်ရောင်ခြင်း၊
(4) Fungal infectious diseases ဖန်းဂတ်စ်ကြောင့်ဖြစ်သောရောဂါများ
Aspergillosis အဆုပ်ထဲဝင်ခြင်း၊ Athlete's Foot အားကစားသမားခြေထောက်၊ Candidiasis = ကင်ဒီဒိုင်ရေးဆစ်၊ (Thrush မှက်ခရု၊ အရေပြား၊ မွေးလမ်း၊ အစာမြိုပြွန်တို့၌ ဖြစ်သည့်ရောဂါများ။) Histoplasmosis အဆုပ်ရောဂါတမျိုး၊ Pneumocystis Carinii Pneumonia (PCP) နူမိုးနီးယားတမျိုး၊ Sporotrichosis အရေပြားနာ၊ Yeast Infections (ရိစ်) = မွေးလမ်ကြောင်း ယားပြီး အဖြူဆင်းခြင်း။
Staphylococcal Infections (စတက်ဖလိုကောကပ်စ်) ဗက်တီးရီးယား အင်ဖက်ရှင်များအတွက်ဆေးများ၊
Folliculitis, Furuncles အရေပြားရောင်ခြင်း အမျိုးမျိုး၊ Impetigo အရေပြားနာ၊ Wound infections, Soft-tissue infections အနာ-ဒဏ်ရာများ၊ Endocarditis နှလုံးအတွင်းသား ရောင်ခြင်း၊ Osteomyelitis အရိုးအတွင်း ရောင်ခြင်း၊ Pneumonia နူမိုးနီးယား၊ Food poisoning အစာဆိပ်သင့်ခြင်း၊ Infections related to prosthetic devices သွားအတု-အရိုးတုရောင်ခြင်း၊ Urinary tract infection ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊
• Clindamycin: Adult 150-300 mg q8h; 300-600 mg IV q8h; Pediatric 25-40 mg/kg/d IV divided tid
• Dicloxacillin: Adult 500 mg q6h; Pediatric 25 mg/kg/d divided q6h
• Trimethoprim-sulfamethoxazole (Septrin): Adult 160 mg TMP/800 mg SMZ BD x 10-14 days; Pediatric >2 years: 6-12 mg of trimethoprim/kg/d divided BD
• Nafcillin: Adult 1-2 g IV q4h; Pediatric 100-200 mg/kg/d IV divided q4h
• Vancomycin: Adult 1 g or 15 mg/kg IV q12h; Pediatric 30-40 mg/kg/d IV divided q12h
• Cefazolin: Adult 1 g IV q8h; Pediatric 50-100 mg/kg/d IV divided q8h
• Minocycline: Adult 100 mg PO/IV q12-24h; Pediatric 2-4 mg/kg/d divided bid
Streptococcus Group A Infections (စတက်ပတိုကောကပ်စ် A) ဗက်တီးရီးယား အင်ဖက်ရှင်များအတွက်ဆေးများ၊
Pharyngitis အာခေါင်ရောင်ခြင်း၊ Tonsillopharyngeal cellulitis အာသီး-အာခေါင် ရောင်ခြင်း၊ Abscess ပြည်တည်နာ၊ Pneumonia နူမိုးနီးယား၊ Necrotizing fasciitis အရေပြား ပြည်တည်ခြင်း၊ Streptococcal bacteremia သွေးထဲပိုး ဝင်ခြင်း၊ Osteomyelitis အရိုးအတွင်းရောင်ခြင်း၊ Ottitis Media နားပြည်ယိုခြင်း၊ Sinusitis ဆိုင်းနပ်စ်၊ Meningitis ဦးနှောက်မြှေး ရောင်ခြင်း၊ or Brain Asscess ဦးနှောက် ပြည်တည်ခြင်း၊ Acute rheumatic fever လေးဘက်နာ ရုတ် တရက်ဖြစ်ခြင်း၊ Rheumatic Heart disease ရူမက်တစ် နှလုံးရောဂါ၊ Acute Glumerulo-nephritis ကျောက်ကပ် ရုတ် တရက်ရောင်ခြင်း၊ Scarlet fever (စကားလက်-ဖီဗာ)၊
• Penicillin G: Adult 2-4 million U IV QID; Pediatric 150,000 U/kg/d IV divided q4h
• Penicillin VK: Adult 500 mg BD/TDS/QID x 10 days; Pediatric 250 mg BD/TDS x 10 days
• Clindamycin: Adult 600 mg IV TDS or 300-450 mg QID; Pediatric 25-40 mg/kg/d IV TDS/QID
• Vancomycin: Adult 15 mg/kg IV q12h (dose based on actual body weight); consider 22.5 mg/kg q12h for CNS infections; Pediatric 40 mg/kg/d IV divided tid/qid for 7-10 days
• Telavancin: Adult 10 mg/kg IV OD for 7-14 d; infuse over 1 h; CrCl 30-50 mL/min: 7.5 mg/kg/d; CrCl 10-29 mL/min: 10 mg/kg q48h;
Streptococcus Group B Infections (စတက်ပတိုကောကပ်စ် B) ဗက်တီးရီးယား အင်ဖက်ရှင်များအတွက်ဆေးများ၊
Pneumonia နူမိုးနီးယား၊ Meningitis ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ Bacteremia သွေးထဲပိုးရောက်ခြင်း၊ Endocarditis နှလုံး အတွင်းသားရောင်ခြင်း၊ Cellulitis, Skin and soft-tissue infection အရေပြားအနာများ၊ Osteomyelitis အရိုးအတွင်း ရောင်ခြင်း၊ Arthritis အဆစ်ရောင်ခြင်း၊ Urinary tract infection ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ Pelvic abscess တင်ပါးဆုံတွင်း အင်္ဂါများ ပြည်တည်ခြင်း၊
• Penicillin G: Adult 12-24 million U/d IV x4weeks
• Cefazolin: Adult 1 g IV TDS
• Vancomycin: Adult 1 g IV BD
• Telavancin: Adult 10 mg/kg IV q24h for 7-14 d; infuse over 1 h, CrCl 30-50 mL/min: 7.5 mg/kg/d, CrCl 10-29 mL/min: 10 mg/kg q48h
• Gentamicin: Adult 60 mg IV TDS;
• Clindamycin: Adult 600 mg IV QID; 900 mg IV TDS, 300 mg QID
Streptococcus Group D Infections (စတက်ပတိုကောကပ်စ် D) ဗက်တီးရီးယား အင်ဖက်ရှင်များအတွက်ဆေးများ၊
Meningitis ဦးနှောက်မြှေးရောင်ခြင်း၊ Peritonitis ဝမ်းဗိုက်အတွင်းဖုံးအလွှာ ရောင်ခြင်း၊ Septic arthritis အဆစ်ရောင် ခြင်း၊ Urinary tract infections ဆီးလမ်းရောင်ခြင်း၊ Neonatal sepsis မွေးစကလေးပိုးဝင်ခြင်း၊
• Penicillin G: Adult 12-18 million U IV q24h in6equally divided doses or continuously, Pediatric >4 weeks: 25,000-400,000 U/kg/d IV QID;
• Ceftriaxone: Adult2g IV OD, Pediatric >4 weeks: 50-100 mg/kg/d IV OD/BD
• Vancomycin: Adult 30 mg/kg per 24 h IV in2equally divided doses not to exceed2g/24 h; Pediatric >4 weeks 40 mg/kg/d IV TDS/QID
Candidiasis Yeast like fungus ဖန်းဂန်စ် မှို ဝင်ခြင်းအမျိုးမျိုးအတွက်ဆေးများ၊
Cutaneous candidiasis အရေပြားမှိုရောဂါ၊
• Topical antifungal agents (Clotrimazole, Ciclopirox, Econazole, Ketoconazole, Miconazole, Nystatin)
• Candida esophagitis: Fluconazole 100-200 mg/d x 14-21 days
• Vulvovaginal candidiasis: A single dose of oral Fluconazole (150 mg)
• Candida cystitis: Fluconazole at 200 mg/d orally x at least 10-14 days
• Renal candidiasis: Fluconazole at 400 mg/d IV or orally foraminimum of2weeks
• Chronic mucocutaneous candidiasis: Fluconazole 100-400 mg/d or Itraconazole 200-600 mg/d